ပရိသတ်တွေ စိတ်မပူ စေဖို့ သူ့ ရဲ့ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကို ပြောပြ လာတဲ့ ရှိုင်း – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ပရိသတ်တွေ စိတ်မပူ စေဖို့ သူ့ ရဲ့ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကို ပြောပြ လာတဲ့ ရှိုင်း
ပရိသတ်တွေ စိတ်မပူ စေဖို့ သူ့ ရဲ့ လက်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကို ပြောပြ လာတဲ့ ရှိုင်း
By Ga MonePosted on April 27, 2021 April 27, 2021
သီချင်း မြူးမြူးလေးတွေ သီဆိုကာ ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် နှစ်သက်အားပေးမှုကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထား သူကတော့ အဆိုတော် ရှိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂီတလောကထဲသို့ ရောက်ရှိလာတာ သိပ်မကြာသေးပေမယ့် အချိန်တိုအတွင်း အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိလာသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှိုင်းကတော့ ရခိုင်လူမျိုး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့နေထိုင်တဲ့ မွေးရပ်မြေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ချွေးနည်း စာငွေများဖြင့်လည်း စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေသော ပြည်သူတွေ ကို ထောက်ပံ့ပေးနေတာပါ။ ဒါ့အပြင် မိတ်ဆွေများစုပေါင်းကောက်ခံရရှိထားတဲ့ အလှူငွေများအား ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ တိမ်ညိုစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှ မီးဘေးသင့်ပြည်သူများထံ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လှူဒါန် းပေးခဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ လှူဒါန်းမှုအစုစုကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်တွင် ဝေမျှပေးတတ်သူပါ။ လတ်တလော သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ကို ဆိုရှယ်မီဒီယာထက်မှာ မမြင်တွေ့ရတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက ရှိုင်းရဲ့လုံခြုံရေး အတွက် စိတ်ပူနေကြတာပါ။
မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း သူ့ရဲ့ Facebook Page တွင် ပရိသတ်တွေ စိတ်မပူ စေဖို့ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေကို အမောပြေတင်ပေးလာပြီး လက်ရှိလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပါ ပြောပြလာတာပါ။ရှိုင်းကလည်း ” ဘာမှ မလုပ်တာ မဟုတ်ဘူး . . ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ပေးမသိတာ . . ဘာလို့​လဲ ? ? အပေါ်က နှစ်ကြောင်းမှာ ရှင်းနေအောင် ပြောပြီးပြီ . . ဒီလောက်ပဲ . . #Mg_Tout_Pa” ဆိုပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါ တယ်နော်။
သီခ်င္း ျမဴးျမဴးေလးေတြ သီဆိုကာ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ တစ္ခဲနက္ ႏွစ္သက္အားေပးမႈကို ရရွိ ပိုင္ဆိုင္ထား သူကေတာ့ အဆိုေတာ္ ရႈိင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂီတေလာကထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာတာ သိပ္မၾကာေသးေပမယ့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိလာသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ရႈိင္းကေတာ့ ရခိုင္လူမ်ိဳး တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သူ႔ေနထိုင္တဲ့ ေမြးရပ္ေျမတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေန ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနသူ ျဖစ္ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ ေခြၽးနည္း စာေငြမ်ားျဖင့္လည္း စားဝတ္ေနေရးခက္ခဲေနေသာ ျပည္သူေတြ ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနတာပါ။ ဒါ့အျပင္ မိတ္ေဆြမ်ားစုေပါင္းေကာက္ခံရရွိထားတဲ့ အလႉေငြမ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ တိမ္ညိဳစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ မီးေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ လႉဒါန္ းေပးခဲ့သူပါ။ သူ႔ရဲ႕ လႉဒါန္းမႈအစုစုကိုလည္း လူမႈကြန္ယက္တြင္ ေဝမွ်ေပးတတ္သူပါ။ လတ္တေလာ သူ႔ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြ ကို ဆိုရွယ္မီဒီယာထက္မွာ မျမင္ေတြ႕ရတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြက ရႈိင္းရဲ႕လုံၿခဳံေရး အတြက္ စိတ္ပူေနၾကတာပါ။
မၾကာေသးခင္ နာရီပိုင္းေလာက္ကလည္း သူ႔ရဲ႕ Facebook Page တြင္ ပရိသတ္ေတြ စိတ္မပူ ေစဖို႔ သူ႔ရဲ႕ ပုံရိပ္ေတြကို အေမာေျပတင္ေပးလာၿပီး လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုပါ ေျပာျပလာတာပါ။ရႈိင္းကလည္း ” ဘာမွ မလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး . . ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ေပးမသိတာ . . ဘာလို႔​လဲ ? ? အေပၚက ႏွစ္ေၾကာင္းမွာ ရွင္းေနေအာင္ ေျပာၿပီးၿပီ . . ဒီေလာက္ပဲ . . #Mg_Tout_Pa” ဆိုၿပီး ေရးသားထားတာ ျဖစ္ၿပီး ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဒီသတင္းကို တစ္ဆင့္ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ေပးလိုက္ ရပါ တယ္ေနာ္။
Previous post ပြေးရင်း လွှားရင်း နဲ့ မောပန်း လာတဲ့ ကလေးတွေကို သူ့ရဲ့ရေခဲချောင်း တွေ အလကားကျွေး ခဲ့တဲ့ ဘဘကြီး အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ပြည်သူ တစ်ဦး
Next post ရင်းနှီး တဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း တွေ အတွက် စိုးရိမ်ပူပန် နေပေမယ့် ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်လို့ ဆုပဲတောင်း ပေးနေရတယ် ဆိုတဲ့ အေးသီတာ